Blue Ventures - Ankoatra ny fiarovana
Famerenana ny fiainan'ny ranomasina amin'ny fametrahana ny mpanjono ho lohalaharana
Mino izahay fa manomboka amin'ny olona ny fanarenana ny ranomasina. Manohana ireo vondrom-piarahamonina amorontsiraka izahay mba hanarenana ny jono sy hamerina ny fiainan'ny ranomasina.
Ataontsika loha laharana ny mpanjono, manome azy ireo izay rehetra ilainy hitantana sy hiarovana ny ranomasina amin'ny fomba mahasoa ny olona sy ny natiora.
Manana finiavana feno fahasahiana ny Blue Ventures: miasa izahay mba hamoronana tontolo iray izay ahitan'ny mpanjono madinika ny trondro lehibe kokoa, ny fivelomana tsara kokoa ary ny fiarovana ara-tsakafo tsara kokoa, ary ny ranomasimbe salama dia feno fiainana ho an'ny taranaka ho avy.
mpanjono madinika tratran’ny asantsika
km2 ranomasina arovan'ny vondrom-piarahamonina amorontsiraka
"Modely ho an'ny olona rehetra miasa amin'ny fitehirizana ireo rafitra voajanahary amin'ny fiainana an-tany eto amin'ity planintsika misedra olana ity."
Naturalista sy mpampita vaovao malaza
Fanaterana mangarahara eo amin'ny jono: Namoaka lisitry ny sambo i Madagasikara
Ny taratasy misokatra dia miantso ny zon'ny vondrom-piarahamonina mba hapetraka ao am-pon'ny drafitry ny Firenena Mikambana hiarovana ny 30% amin'ny planeta
Vaovao & tantara bebe kokoa